News Collection: बलिविरुद्ध हिरोइन !
बलिविरुद्ध हिरोइन !
हिरोइन पूजना प्रधान अहिलेको दसैंलाई बेग्लै रुपमा मनाउन चाहन्छिन् । उनमा 'फेस्टिभ मुड' त जागिसकेको छ तर बेग्लैढंगमा । उनको दसैं विशुद्धरुपमा शाकाहारी हुनेछ । यो दसैंमा उनी बलिप्रथा र जनावरमाथिको हिसाविरुद्ध उभिनेछिन् । उनको टीकामा चामलको अक्षेता हुनेछैन, हुनेछ त चन्दन र अबिरमात्र । दक्षिणा पनि अस्वीकार गर्नेछिन् उनले लिनेछिन् आशिर्वादमात्र ।
स्वागत छ तपाईंलाई हिरोइन पूजना स्त्रीको आश्रममा जहाँ बदलिँदो दसैंको यस्ता स्वरुपहरु भेटिनेछन् । दसैं आफ्नै ढंगले मनाउनुसँग पूजनासँग केही तर्कहरु छन् जस्तो : एक करोडभन्दा बढी रकम चामलमा खर्च हुने हाम्रो जस्तो देशमा बरु चामल कोही गरिबलाई दिनु वेश हुन्छ । भलै कर्णालीका कतिपय जिल्लामा खाद्यान्न संकट देखापरेको बेला हामी भने निधारमा चामल टाँसेर हिँड्नु ठीक हुँदैन ।' यस्तो तर्क गर्ने पूजनाले 'चामल जोगाऔं' अभियान थाल्दैछिन् ।
जनावर मारकाटको बलिप्रथाविरुद्ध पनि पूजनाले उभिएर दसंै मनाउनेछिन् । तीनवर्षदेखि उनी बलिविरुद्ध लागिपरेकी छिन् । भन्छिन् 'समाज बिगि्ररहेको छ सपि्रएको छैन, पूर्खाहरुले बनाएका अवैज्ञानिक प्रथा आत्मसात गर्‍ यौं भने हामीपनि सकिन्छौं । परिवर्तन गर्न केही गुमाउनुपर्छ । त्यो सुरुआत मैले गरेकी हुँ ।' हामीले पनि पूजनाको यस्तो सोच र अभियानलाई साथ दिने होइन ?